Nvidia High Tsanangudzo Audio nyaya dzinoita senge dzinokanganisa vakawanda vashandisi mazuva ano, kunyangwe yavo yekupedzisira-kuita hardware.
Isu takaongorora dambudziko iri futi, saka iwe unowana zvakanyorwa pazasi mhinduro dzakanakisa dzekushandisa. Kutanga nekushandura odhiyo yekuburitsa mudziyo.
Iwe unowanzo sangana nenyaya dzakafanana here? Tarisa uone zvedu Mutyairi Wekunetsa Dambudziko chikamu.
Kuti uwane mamwe mazano ekukurumidza, tora nguva yako uye ushanyire edu PC Software Kutambudza Hub naizvo.
Sekuziva kwedu tatoziva, kunyangwe Ultra-inoita zvemitambo ichadonha mukushayikwa kwezvakakodzera Software.
Mune akanakisa-mamiriro ezvinhu, iwe unozokwanisa kumhanyisa zvese mushe kunyangwe nema generic kana echinyakare madhiraivha.
Nekudaro, yakawanda yenguva iwe yaunowana yakawanda nyaya iyo iyo dzimwe nguva inokanganisa zvinopfuura kungoita GPU kuita.
Imwe nyaya yakajairika nevatyairi vane mhoswa ine chekuita nekurira, senge nyaya iripo vamwe vashandisi vanorasikirwa zvachose neruzha mushure mekuisa vatyairi veNVIDIA GPU.
Kusava neruzha paPC yako kunogona kuve dambudziko rakakura, uye vashandisi vazhinji vakataura kuti ruzha rwavo ruripo mushure mekuvandudza vatyairi veNvidia.
Pane mashoma anogona kuita ekushandira padambudziko iri, sezvaunoona pazasi.
Vazhinji vashandisi vari kunyunyuta avo Nvidia mifananidzo makadhi haana kuwanikwa. Heano maitiro ekugadzirisa izvo!
Ndingaite sei ini kugadzirisa Nvidia High Tsanangudzo Audio isiri kushanda?
1. Chinja dhizaini inoburitswa
Kungofa rira icon munzvimbo yeNyaziso uye yakavhurika Playback namano.
Simbisai mudziyo wakasarudzika uye Isa seChina.
Kungofa Dhijitaru Odhiyo / Monitor / HDMI uye sarudza chokukuvadza kubva pamenyu.
Click OK uye tarisa shanduko.
Paunongoisa vatauri vako seyakajairwa kutamba mutambo, nyaya yacho inofanira kunyatso gadziriswa.
2. Rollback odhiyo madhiri
Kanda-kona pane kutanga bhatani uye sarudza Device Device kubva Win + X menyu.
Enda kune Mutinhi, vhidhiyo uye vatambi vemavhidhiyo. Dzvanya-kurudyi Realtek HD Audio mutyairi uye sarudza Properties kubva pamenyu.
Mu mutyairi tab, tora iyo Dzorerai Mutyairi Wekare bhatani.
Izvo zvinofanirwa kudzosa iyo yapfuura vhezheni uye pamwe kugadzirisa nyaya dzako dzinzwika.
Dzimwe nguva, vatyairi veGPU vanoshandura dhizaini yekuburitsa audio kuHDMI panzvimbo yematauri kana mahedhifoni. Nerombo, unogona kudzoreredza zvirongwa zvekushandisa nekushandisa matanho ari pamusoro.
Nekudaro, kana dambudziko rikaramba riripo, enda pasi kune rinotevera mhinduro.
3. Gadziridza kana kudzosera odhiyo madhiraivhi
Dzokera kune Device Device wobva wadzvanya mutyairi weradio kuti avhure zvivakwa zvaro.
pasi mutyairi tab, tora iyo Uninstall.
Kana hwindo rekusimbisa rikaonekwa, tinya Uninstall.
Iye zvino iwe unogona kuisa iyo yakadhirowa mutyairi.
Mushure mekuiswa kwapera, tangazve PC yako.
Kana ruzha rwako ruchiri kunze kana kuti pasina shanduro dzakapfuura dzaungadzosera, kubheja kwako kwakanyanya kudzosera mutyairi.
Kuti utore mutyairi wazvino unofanirwa kushanyira mamaboardboard kana webhusaiti yemugadziri kadhi webhusaiti uye kurodha mutyairi wazvino wechigadzirwa chako.
Mushure mekuita izvo, iwe unofanirwa kusunungura mutyairi wako wazvino nekuita zvinotevera. Vashoma vashandisi vakashuma kuti vanogadzirisa dambudziko racho nekusabvisa zvese Nvidia audio uye main drive driver kubva kuPC yavo.
Mushure mekuita izvo, Windows ichaisa default audio mutyairi uye dambudziko rinofanira kugadziriswa.
Vazhinji vashandisi vanotaura kuti haufanire kuburitsa yako yekutanga odhiyo mutyairi. Pane kudaro, iwe unongofanirwa kubvisa mutyairi weNvidia odhiyo uye nyaya yacho inofanira kugadziriswa zvachose.
Vazhinji vashandisi havana kukwanisa kuisa madhiraivha avo. Heano maitiro ekuzviita mune mashoma mashoma matanho!
Gadzirisa madhiraivha otomatiki (yakakurudzirwa)
Download uye dzishandise TweakBit Driver Dudziro.
Kana yaiswa chete, chirongwa ichi chinotanga kuongorora PC yako kune evachango driver. Driver Kuwedzeredza ichaongorora yako yakaiswa madhiraivha majasi kupesana neyegore dhata rake reazvino shanduro uye ndokurudzira chaiyo yakagadziriswa. Zvese zvaunoda kuti uite kumirira kuti scan ipedze.
Paunenge wapedza scan, iwe unowana chirevo kune vese madhiraivha anotyaira akawanikwa paPC yako. Ongorora runyorwa uone kana iwe uchida kumutsiridza mutyairi mumwe nemumwe kana kuti zvese kamwechete.
Kugadzirisa mutyairi mumwe panguva, tinya Update mutyairi batanidza padivi pezita remutyairi kana tinya tinya Gadziridza zvese bhatani riri pazasi kuti riise otomatiki zvese zvinokurudzirwazve.
chitsamba: Vamwe vatyairi vanofanirwa kuisirwa mumatanho akawanda saka uchafanira kurova Update bhatani kakawanda kutozosvikira iyo yese midziyo yayo yaiswa.
Kana nzira yapfuura ikasagadzirisa nyaya, edza yechitatu-bato chishandiso. Kudhawunirodha madhiraivha nemaitiro inzira inotakura njodzi yekuisa mutyairi asiri iwo, izvo zvinogona kutungamira mukukanganisa kwakakomba.
Iyo yakachengeteka uye yakapusa nzira yekugadzirisa madhiraivha pane a Windows komputa iri kushandisa otomatiki chishandiso senge TweakBit Mutyairi Wekuvandudza.
Mutyairi Kuwedzeredza anozvizivisa ega ega mudziyo pakombuta yako uye anoenderana nawo neazvino mutyairi shanduro kubva kune yakawandisa online database.
Vatyairi vanogona kuzogadziridzwa mumabheji kana imwechete panguva, vasingadi kuti mushandisi aite sarudzo dzakaoma mukuita. Shandisa matanho ari pamusoro apa mune izvo.
Disclaimer: Mamwe mabasa eichi chishandiso haasi emahara.
Kunze kwekuteerera madhiraivha, imwe mhinduro inogona kudzosera GPU vatyairi. Mune zvimwe zviitiko, maitiro ekuisa anogona kukanganisa kana kudzima mafaera akakosha.
Mune ino kesi, simbisaiwo madhiraivha apfuura e NIVIDA graphic processor. Unogona kuvawana pano. Kana kadhi rako richimhanyisa pane vatyairi vegumbo, unogona kuzviwana nekutsvaga.
Tinokurudzira kuti ushandise izere panzvimbo yemabeta shanduro kuti ugadzikane zvirinani. Kana iwe uchida kubvisa zvachose mafaera ese anoenderana nekadhi yako yemifananidzo, unogona kuzviita uchishandisa Display Driver Uninstaller.
Takatonyora pfupi pfupi nhungamiro pa mashandisiro aunoita Display Driver Uninstaller, saka ita chokwadi chekutarisisa icho chinyorwa kuti uwane mirairo yakakwana.
6. Gonesa paneboardboard inorira muBIOS
Restart PC yako uye tinya Kudzima Zvichienderera kusvikira Zvirongwa zveBIOS zvaratidzwa. Izvi zvinogona kusiyana kubva mukumisikidza kuenda mukumisikidza uye zvinoenderana neyako mamaboard. Kazhinji yenguva. iwe uchaona iwo unoshanda kuraira muzasi kuruboshwe kona.
Enda kune Onboard Inzwi Chingoni uye tumira kune ON panzvimbo ye Auto.
Sevha shanduko uye ubude BIOS.
Iwe unofanirwa kunzwa kurira-inozivikanwa yekutanga.
Mazhinji emadziro eboardboard ayo anovharira zvine mutsindo-zvine chekuita nesarudzo anogona kukonzeresa zvikanganiso mushure mekuiswa kweGPU madhiraivha. Neraki, dambudziko iri rinogona kugadziriswa mukati meBIOS marongero.
Iyi nyaya yakajairika uye yakanangana neNVIDIA Graphics asi inofanirwa kugadziriswa kana iwe waedza mashoma eaya ekushandira.
7. Ita yakachena yekuisa yeNvidia mutyairi
Dhawunorodha vatyairi veNvidia.
Dzvanya kaviri faira yekuseta kuti umhanye.
Paunosvika ku Sarudzo dzekuisa menyu iva nechokwadi chekusarudza Tsika (Advanced) uye tinya Next.
Zvino, taurisa Ita nekushambidzika kwakachena sarudzo uye tinya pamusoro Next.
Tevedza rairo pachiratidziro kuti upedzise kuita kwekuisa.
Vazhinji vashandisi vakashuma kuti ruzha rwakashaikwa mushure mekuisa maNvidia driver. Nekudaro, unogona kugadzirisa dambudziko iri nekungoita yakachena kuisa madhiraivha ako.
Izvi zviri nyore uye unogona kuzviita nekutevera pamusoro apa nhanho. Mushure mekuita ivo, vatyairi vako vekutanga vachabviswa uye Windows ndichaisa madhiraivha achangoburwa panzvimbo.
Vanoverengeka vashandisi vakashuma kuti iyi mhinduro yakavashandira, saka inzwa wakasununguka kuti uzviedze.
8. Disable Nvidia HDMI Inzwi Adapter muBIOS
Kana iwe usina ruzha mushure mekuisa Nvidia magiraidhi madhiraivhi, dambudziko rinogona kunge rakanangana neyako Bios nezvimiro zvacho.
Sekureva kwevashandisi, vakakwanisa kugadzirisa nyaya iyi mushure mekukuvadza Nvidia HDMI Sound Adapter.
Kuti uite izvozvo, pinda BIOS uende Yepamberi> Onboard Midziyo. Ikoko iwe unofanirwa kukwanisa kuwana Nvidia HDMI Inzwi Adapter uye uibvise.
Izvi zviri nyore, asi kana iwe uchida rumwe ruzivo rwekuti ungawana sei BIOS uye maitiro ekudzima gadziriro iyi, tinokupa zano kuti utarise Motherboard bhuku.
9. Gadziridza BIOS yako
Vashoma vashandisi vanoti unogona kugadzirisa dambudziko iri nekugadzirisa BIOS kune yazvino vhezheni. Tisati tatanga, tinofanirwa kutaura kuti BIOS kugadzirisa inzira inogona kune ngozi.
Hatina mhosva yekukuvara kungaitika. Kugadziridza BIOS kwakasiyana kune yega mamaboard.
Sezvo pasina gwara renyika dzese, isu tinokurudzira zvakasimba kuti iwe utarise yako mamaboard bhukwana kuti uwane yakajeka mirayiridzo.
Isu takanyora futi pfupi kaira maitiro ekupenya BIOS yako, saka inzwa wakasununguka kuti uzviongorore.
Pamusoro pezvo, usakanganwa kugovana dzimwe mhinduro dzako kana kubvunza mibvunzo inoenderana nenyaya mune zvakataurwa pazasi.
Kutaura nezve mhinduro, idzo dzakanyorwa pamusoro dzinogona kusevenzeswa kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchimedza
Nvidia HDMI odhiyo isiri kushanda - Iri idambudziko rakajairika rakasangana nevazhinji vashandisi vanoshuvira kunakidzwa naNvidia neyavo yemitambo inogamuchira. Kana iwe uri mumwe wavo, iwe unofanirwa kukwanisa kuzvigadzirisa uchishandisa imwe yemhinduro dzedu.
Nvidia audio driver haishande - Sezvo madhiraivha eGPU achiwanzo kukunda madhiraivha odhiyo, zvikanganiso zvakadaro zvinobuda kunze kwebhuruu futi.
Nvidia High Tsanangudzo mutyairi mutyairi Windows 10 hapana runyararo - Kushandisa iyo HDMI kutenderera odhiyo uye vhidhiyo kune chero imwe skrini kazhinji inotungamira kune ino nyaya. Nekudaro, iwe unofanirwa kukwanisa kugadzirisa izvo nekushandisa imwe yemhinduro dzedu.
Hapana ruzha Nvidia High Tsanangudzo odhiyo - Izvi zvinoitikawo kana uchishandisa HDMI kutepfenyura odhiyo nevhidhiyo kune zvimwe zvinoratidzwa. Vanotyaira zvisirizvo uye chingangove chakaremara pabhodhi rezwi mudziyo muBIOS kazhinji ndivo vanokanganisa.
Hapana ruzha mushure meGeforce update - Vazhinji vashandisi vakataura kuti ruzha rwavo rwange rwaenda mushure mekuvandudza madhiraivha avo eGeforce kana mushure mekuisa kadhi yemifananidzo yeGeforce.
Hapana ruzha mushure mekuisa giraidhi yemifananidzo Windows 10 - Sekureva kwevashandisi, iko kukanganisa kunogona dzimwe nguva kuoneka mushure mekuisa nyowani yemifananidzo kadhi. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nemadhiraivha asingaenderane.
Nvidia High Tsanangudzo Audio haisi kushanda Windows 10 - Vashandisi vakati wandei vakataura kuti yavo High Definition Audio haisi kushanda. Izvi zvinogona kukonzerwa nemadhiraivha ako kana neeseBIOS marongero.
Nvidia vhidhiyo kadhi hapana ruzha - Vashandisi vakashuma kuti ruzha rwavo rwakarasika zvachose vachishandisa mifananidzo yeNvidia. Kugadzirisa nyaya yacho, ungatofanira kudzoreredza yako Nvidia uye odhiraivha madhiraivha.
FAQ: Dzidza zvakawanda nezve Nvidia High Tsanangudzo Audio
Ini ndinogonesa sei Nvidia HD Audio?
Kugonesa Nvidia HD Audio, pinda mukati NVIDIA Kudzora Panel navigation yemuti pane uye tinya Gadza odhiyo yedhijitari pasi kuratidza.
Ndogadzirisa sei Nvidia High Tsanangudzo Audio?
Kana iwe uchishuwira kukurumidza kugadzirisa Nvidia High Definition Audio nyaya, iwe unofanirwa kushandura odhiyo yekuburitsa chishandiso kana kugadzirisa iwo odhiyo madhiraivha.
Ndinogadzirisa sei madhiraivhi ekuteerera?
Kuti ugadzirise madhiraivha edhiyo, tinya-pane kutanga bhatani, bva wadzvanya Device Device, uye sarudza Ruzha, vhidhiyo, uye vatongi vemitambo. Pasi payo mutyairi tab, ingo pusha Update Driver Software.
Hapana ruzha paNetflix? 6 anoshanda mhinduro kugadzirisa
Nhare dzisiri kushanda / dzakawanikwa mukati Windows 10 [Nyore Kugadzirisa]